realme C3 ဂိမ်းမင်းဖုန်းက တကယ်ရော ပေးရတဲ့စျေးနဲ့တန်သလား?
“Gaming Monster”,“Budget Gaming”. Entry Level Smartphone User တွေအပေါ် ဒီဖုန်းအဓိကထားတဲ့ Target က ထူးခြားတယ်ပြောလို့ရတယ်။ Idea ကိုလည်း ချီးကျူးပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ၂သိန်း ဆိုတဲ့ဈေးနဲ့ ရနိုင်မယ့် Storage Option တွေကို Realme က ကြေငြာလိုက်ခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ ကိုယ်တွေမျှော်လင့်ခဲ့တဲ့ “Budget Level အတွက် ညွှန်းဖို့အသင့်တော်ဆုံး” ဆိုတဲ့အတွေးဟာ သို့လောသို့လော စဉ်းစားစရာမေးခွန်းတွေကြောင့် တွေဝေခဲ့ရသလို ဒီမေးခွန်းတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့အဖြေတွေကိုရှာရင်း ဒီဖုန်းအတွက် ကိုယ်တွေ Page ရဲ့ Full Review ဟာလည်း သူများတွေထက် နောက်ကျခဲ့ရတယ်။
ဒါကြောင့် ခုလိုပေးခဲ့ရတဲ့အချိန်နဲ့တန်အောင် ဒီ Realme C3 ပေါ်မှာ First Impression တုန်းက မသိခဲ့၊ မမြင်ခဲ့တဲ့ ရှုထောင့်နဲ့ အမြင်တစ်ချို့ကိုပါ ထည့်ပြောသွားမှာပါ။
ဒီအပိုင်းကတော့ First Impression တုန်းကအတိုင်းပါပဲ။ “နင်ဟာ ဟိုအရင်အတိုင်းပဲရှိမယ်” ပေါ့။ သို့ပေမယ့် ဒီဖုန်းကို ကြာကြာသုံးရင်း သတိထားမိလာတာက သူ့ရဲ့ Weight ပါ။ အရမ်းလေးတာမျိုးမဟုတ်ပေမယ့် ကြာကြာကိုင်တဲ့အခါ သိပ်ပြီး သက်တောင့်သက်သာမရှိသလို ခံစားရတယ်။ အထူးသဖြင့် ဂိမ်းဆော့တဲ့ Landscape အနေအထားကို ကြာကြာကိုင်တဲ့အခါ အောက်ဘက်က ဖုန်းကိုထိန်းကိုင်ထားတဲ့ လက်ချောင်းလေးတွေ နာလာတယ်။
ဘာကြောင့်လဲလို့ သေချာကြည့်မိတော့ တရားခံက သူ့ဘေး Frame မှာချိုးထားတဲ့ ထောင့်ချိုးနဲ့ ဖုန်းရဲ့ Weight ပေါင်းစပ်မှုရလဒ်ဖြစ်နေပါတယ်။ Cover တပ်လိုက်ရင်တော့ လက်နာတာ သက်သာနိုင်ပေမယ့် Phone ရဲ့ Weight က ထပ်တက်သွားဖို့ရှိနေပြန်တယ်။
ဒါက Gaming အသားပေးရွေးချယ်ဖို့ စဉ်းစားမယ့်သူတစ်ယောက်နေရာက နဲနဲချေးများကြည့်တာဆို ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်ပြီး Realme Phone အများစုမှာ မရိုးတမ်းသုံးနေတဲ့ Camera Design ကြီးကို မြင်ရဖန်များလွန်းလို့ ရိုးအီလာပြီခံစားရပေမယ့် Budget Phone တစ်လုံးမို့ နားလည်ပေးလိုက်ပါ့မယ်။
realme C3 ရဲ့ Display ကို HD Resolution မို့ အများစုက အားနည်းချက်အဖြစ်မြင်ကြပေမယ့် ကိုယ်တွေအတွက်တော့ လက်ခံနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်နေပြန်ရော။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူ့ Display ပါ်က Media Experience က အဆိုးကြီးမဟုတ်တာကြောင့်ပါ။
တစ်ချို့ 1080p LCD တွပေါ်မှာဖြစ်တတ်တဲ့ ဖွယ်တယ်တယ် Color မျိုး C3 မှာ မကြုံရသလို တော်ရုံ 720p Content တွသူ့ပေါ်မှာကြည့်ရ၊ မြင်ရတာ လက်ခံနိုင်အောင် ကောင်းတဲ့အနေအထားပါ။
နောက်ပြီး 20:9 Ratio ကို သမရိုးကျ 16:9 Video တွေ Full Screen ကြည့်ဖို့ အဆင်မပြေလောက်ဘူးထင်ခဲ့ပေမယ့် တကယ်တမ်းကျ အဆင်ပြေနေပြန်ရော။ နောက်ပြီး HDR Support မပေးတဲ့ ဒီဖုန်းမှာ Youtube ပေါ်က HDR Video တွေ 60fps Game Replay တွစမ်းကြည့်တော့လည်း သူ့ဟာနဲ့သူ ဟုတ်နေတာပဲ။ ဆိုတော့ realme C3 ကို Display နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောချင်တာက ထင်ထားသလောက် မဆိုးပါဘူးဆိုတဲ့ အဖြေပါ။
၂သိန်းဝန်းကျင်ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ Speaker ကအသံကို ဘယ်သူမှတော့ အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်ကြမယ်မထင်။ ဒါပေမယ့် TheFatRat ရဲ့ Oblivion သီချင်းစမ်းဖွင့်ကြည့်တော့ စစချင်းမှာထွက်လာတဲ့ Percussion သံလေးကြားပြီး သဘောကျလို့ ပြုံးမိသေးတယ်။ အသံကျယ်ပေမယ့် Flat ဖြစ်လွန်းတယ်လို့ ကိုယ်တွေတော့မြင်တယ်။
C3 မှာ နားကြပ်ပေါက်ပါသလို Real Sound Technology ကြောင့် Equalizer မှာ ချိန်ညှိနိုင်မယ့် Option လည်း ပါမယ်။ သို့ပေမယ့် စမ်းနားထောင်သလောက် သူ့ Sound Quality က ပုံမှန်လောက်ပဲရှိတာတွေ့တယ်။
Bass သံ နဲနဲပိုပေါ်ပြီး Sound Stage တွေလည်း ကွဲပေမယ့် အသံ Color နဲ့ Power မှာတော့ အောက်နေတယ်ခံစားရ။ အားသာချက်ကိုပြောရင် Volume တစ်ဝက်လောက်တင်ရုံနဲ့ အသံကောင်းကောင်းကျယ်တာ။ Bass သံကျယ်တာ ကြိုက်တတ်ရင်တော့ အဆင်ပြေမှာပါ။ သူ့ Level တစ်ခုမှာတော့ သင့်တင့်တဲ့ Sound Quality ပြန်ရတယ်လို့ပဲ ဆိုရမှာပေါ့။
First Impression တုန်းက ဖုန်းစပွင့်လို့ Boot တက်တဲ့အခါ ရတဲ့ Vibration Sense ကို ကြိုက်တယ်ပြောခဲ့ပေမယ့် Keyboard ရိုက်၊ Noti ဝင် အဲလိုအချိန်တွေမှာတော့ Haptic အတော်ဝိပါတယ်။ ဒီဈေးဆိုတော့လည်း သူ့အထွာနဲ့သူပေါ့လေ။
realme C3 မှာ Realme UI ကို ပထမဆုံး Out of box ပါလာတယ်ကြားတုန်းက ဝမ်းသာအားရစမ်းခဲ့သလို Color OS6နဲ့ယှဉ်ရင် ကွဲပြားမှုတွေတွေ့ခဲ့ရလို့လည်း Color OS ကနေ ရုန်းထွက်နိုင်ပြီထင်ခဲ့မိတယ်။
ဒါပေမယ့် ColorOS7ရဲ့ Feature တွေ လေ့လာအပြီးမှာတော့ အဲဒီအပျော်တွေ ကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက် ပျောက်ကုန်တော့တာပဲ။ realme UI သစ်မှာ အရင်ထက်အမြင်ရော Feature အရပါ တိုးတက်မှုတွေ တွေ့လာရတာအမှန်ပါ။
ဒါပေမယ့် အဲဒါတွေမှန်သမျှက ColorOS7မှာ တစ်ထပ်တည်းပါနေတဲ့အခါ realme UI ဟာ ColorOS7ရဲ့ အမည်ပြောင်း UI သက်သက်လားဆိုတဲ့အတွေးက Cheat လုပ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့ Feeling မျိုး ကိုယ်တွေတော့ ခံစားရတယ်။
နောက်ပြီး သူ့ရဲ့ Icon Style စိတ်ကြိုက်ပြောင်းနိုင်တဲ့ Feature က Default Theme ရဲ့ Icon တစ်ခုထဲမှာပဲ အလုပ်ဖြစ်တာပါ။ သူ့မှာ အသင့်ပါတဲ့ Icon Style နှစ်ခုကလည်း မူရင်း Icon နဲ့မတူတဲ့ Icon Pack တွေ ဖြစ်နေပြန်တယ်။
ဒီတော့ Icon Pack တွေ Playstore က Down ထည့်လို့ရမလားစမ်းကြည့်တော့ မရပြန်။ ဒါဆို Icon Style ပြောင်းတဲ့ Feature ဘာလို့များထည့်နေသေးလဲ? Theme အသစ်ပဲ Down သုံးခိုင်းရောပေါ့။
နောက်တစ်ချက်က UI Experience ပါ။ ဒါကတော့ Software ထက် Hardware (အထူးသဖြင့် RAM) နဲ့ဆိုင်မယ်ထင်ရဲ့။ App အဝင်အထွက်၊ Multitasking နဲ့ Scroll လုပ်တဲ့နေရာတစ်ချို့မှာ ထစ်တာ၊ Delay ဖြစ်တာ ခဏခဏကြုံရတယ်။
ပြောချင်တာက ပထမဆုံး UI Package အနေနဲ့ Software Experience မှာ လိုအပ်ချက်တစ်ချို့ရှိတာ နားလည်နိုင်ပေမယ့် ColorOS7ကို realme UI လို့ နာမည်ပြောင်းနေမယ့်အစား အရင်လို Realme ဖုန်းတွေအတွက် Additional Feature လေးတွေထည့်ပြီး ရိုးသားခဲ့မယ်ဆိုရင် ပိုပြီးကျေနပ်ခဲ့မိမှာပါ။
Entry Level Smartphone တစ်လုံးအနေနဲ့ သူ့ Performance ကတော့ သူ့ဈေးဝန်းကျင်ရဲ့ အကောင်းဆုံးအနေအထားမှာ ရှိနေတယ်။ Helio G70 ရဲ့ ရုန်းအားကလည်း Mediatek ဆိုပြီး လျှော့တွက်မရ။
PUBG Latest Update မှာ Balance ကို Ultra Setting အထိ အမြင့်ဆုံးထားဆော့လို့ရတယ်။ HD, High Setting ကိုလည်း Support တယ်ဆိုပေမယ့် 20fps ဝန်းကျင်ပဲရတဲ့ Gaming Experience ကို ကိုယ်တွေတော့ အလုပ်ဖြစ်တယ်မယူဆဘူး။
Ultra Setting မှာ တစ်ချက်တစ်ချက် Frame Drop ဖြစ်တာကလွဲရင် ၂ သိန်းဝန်းကျင်မှာ ဒီ SoC ကို Gaming အတွက် Snapdragon 665 ထက် ပိုပြီးရွေးသင့်တဲ့ SoC လို့ မြင်တယ်။ PUBG 1hr ဆော့အပြီးမှာ ဖုန်းနောက်ကျောက Heat ကို ခံစားမိပေမယ့် အရမ်းမဆိုးသလို လက်ကိုင်တဲ့ ဘယ်၊ ညာနှစ်ဖက်နားက အလယ်လောက် မပူတာကြောင့် Experience ပိုင်းကို မထိခိုက်ဘူးလို့မြင်တယ်။
SoC နဲ့အတူ အားရဖို့ကောင်းတဲ့နောက်တစ်ချက်က သူ့ Battery Life. 720p Video 1hr ကို 4%, Youtube 1hr ကို 6-7% နဲ့ PUBG 1hr ကို 12-14% ဆိုတဲ့အနေအထားက Normal Usage မှာဆို လုံးဝ2Day Phone ပါ။
ဂိမ်းမထိုင်မထဆော့ရင်တောင် တစ်ရက်စာကို အေးဆေးခံလိမ့်မယ်။ ဒီဈေးမှာမို့ ဝိတ်လျှော့ဖို့ Type-C မသုံးတာကို လက်ခံပေမယ့် 18W Quick Charge လေးတောင် Support မလုပ်တာကိုတော့ အပြစ်မြင်ချင်တယ်။ Battery အပြည့်သွင်းဖို့ ၃ နာရီလောက်ကြာတာမို့ပါ။
realme C3 နဲ့ မလှမ်းမကမ်းဈေးမှာ 5i ရှိနေတယ်။ အဲဒီဖုန်းက Quad Camera နဲ့ Camera အသားပေးဖုန်းဖြစ်နေတဲ့အခါ ကိုယ့် Product ကိုယ် အချင်းချင်းမ Kill မိအောင် C3 ကို Camera လျှာ့ထုတ်တယ်။
အဖြေက ဒါပါပဲ။ Main Camera က အလင်းအရမ်းကောင်းရင်တော့ Detail မဆိုးပေမယ့် Color နဲ့ White Balance မမှန်။ Macro Camera က Oversharpen ဖြစ်။ Night Mode မပါ။
တစ်ခုဖြေသာတာက Manual Mode မှာ Shutter Speed ကို 16 sec ထိ သုံးခွင့်ပေးထားတာ။ ဆိုတော့ အပွင့်လင်းဆုံးပြောရရင် Camera အသားပေးချင်ရင်တော့ realme 5i ကို ပိုစဉ်းစားသင့်တယ်။
Storage ပိုင်းလည်း ထိုနည်းတူပါပဲ။ 32/3 GB က realme C3 ရဲ့ အများဆုံးရွေးနိုင်တဲ့ Storage နဲ့ RAM ပါ။ သူ့ထက် ၃သောင်းလောက်ထပ်သုံးရင်တော့ 64/4 နဲ့ realme 5i ရမယ်။ SD Card သုံးရင်တော့ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ အဆင်ပြေမယ်ထင်ရဲ့။
realme C3: Personal View
ဆိုတော့ realme C3 က ဘာဖြစ်ချင်တာလဲ? ရှင်းပါတယ်၊ Entry Level ရဲ့ Gaming အသားပေး ဖုန်းဖြစ်ချင်တာပါ။ ဒါဆို ဘာလို့များ 5i ကို ထုတ်နေသေးလဲ? ဒါကတော့ ၂သိန်းဝန်းကျင်မှာ Camera နဲ့ Social Media အသားပေးသုံးချင်သူတွေကို Game ဆော့ချင်တဲ့ Fan တွေဆီက ခွဲထုတ်ပြီး ဈေးကွက်နေရာ ပိုယူချင်တာလား?
ဒါမှမဟုတ် Helio G70 က Camera ရဲ့ Image Processing အတွက်ပဲ မကောင်းလို့လား ဒါကတော့ realme ကိုယ်တိုင်ပဲ သိလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်အမြင်အရ C3 ရဲ့ SoC နဲ့ realme UI ကိုသာ 5i မှာပေါင်းထည့်လိုက်ရင် 5i ဟာ သူ့ဈေးမှာ ညွှန်းရအတော်အဆင်ပြေတဲ့ All-rounder Phone တစ်လုံး ဖြစ်မှာအသေချာပါပဲ။
realme C3 ကို မိတ်ဆက်တော့မယ်ဆိုတုန်းက ၂သိန်းတန် Version သာ 64/4 GB Version ဖစ်ခဲ့ရင် ဒီဖုန်းကို ဒီဈေးမှာ P2P အကောင်းဆုံးဖုန်းအဖြစ် လုံးဝညွှန်းမိမှာပါ။ ဒါပေမယ့် 32/3 GB အနေအထားမှာ သူ့ထက် ၁သောင်းမပြည့်တပြည့်သုံးရုံနဲ့ 1080p Display, Glass Back နဲ့ ပို Premium ဖြစ်တဲ့ Design, Camera ၄ လုံးပါတဲ့ Redmi Note 8 ရှိနေပြီ။
UI ပိုင်းမှာပြောခဲ့သလို 4GB RAM ကို Minimum ထားရှာရမယ့် 2020 လိုအချိန်မျိုးမှာ RAM 2GB ပဲပါတဲ့ ၁သိန်း၇သောင်းတန် Version ကို ရေရှည်သုံးဖို့ဆို ညွှန်းရခက်ပြန်တယ်။
C3 နဲ့ ယှဉ်ရင် SoC ပိုင်းကလွဲပြီး Type C နဲ့ Fast Charging ရတဲ့၊ Camera Sensor တွေ ပိုကောင်းတဲ့ Redmi 8 က 32/3 GB ကို ၁ သိန်းခွဲဝန်းကျင်ဆိုတော့
ဒါကြောင့် realme C3 ကို ရွေးဖို့စဉ်းစားရင် ကိုယ်က ဖုန်းတစ်လုံးမှာ ဘယ်အရာတွေအဓိကသုံးမှာလဲ အရင်စဉ်းစားပါ။ အထူးသဖြင့် Game ကို ရှယ်ဆော့မှာ၊ Battery လည်း ရှယ်ခံချင်တာဆိုရင်တော့ ၂သိန်းဆိုတဲ့ဈေးမှာ ဒီဖုန်းထက်ကျော်ပြီး ညွှန်းစရာဖုန်း ခုချိန်မှာ မရှိသေးပါဘူး။ ၃သောင်းဆိုတဲ့ပမာဏကို မနှမြောပဲ 32/3 GB Version ကို ရွေးဖို့ အကြံပေးပါရစေ။
realme C3 Homepage (India)